Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-UK Breaking » I-UK iyayekisa imithetho yokungena yabokufika abagonywe ngokuphelele
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
I-UK iyayekisa imithetho yokungena yabokufika abagonyiwe
Uhlelo lwamarobhothi olukhona njengamanje luzothathelwa indawo luhla olulodwa olubomvu lwamazwe nezindawo oluzoqhubeka lubaluleke kakhulu ukuvikela impilo yomphakathi, kanye nezindlela zokuhamba ezenziwe lula zabafika abavela emhlabeni wonke kusukela ngoMsombuluko 4 Okthoba ngo-4 ekuseni.
I-UK izonciphisa isidingo sokuhlolwa sabahambi abafanelekile abagonyiwe bakwamanye amazwe lapho befika.
Abagibeli abafanele abagonywe ngokuphelele bazokwazi ukufaka esikhundleni sokuhlolwa kwabo kosuku lwe-2 ngokuhlolwa okushibhile kokuhamba kwesikhathi.
Noma ngubani othola ukuthi une-HIV uzodinga ukuhlukanisa ngokushesha futhi athathe ukuhlolwa kwe-PCR okuqinisekisayo.
UNobhala Wezokuthutha wase-UK uGrant Shapps umemezele namuhla ukuthi kusukela ngo-Okthoba 4, 2021, uhulumeni wase-UK uyayinciphisa kakhulu imithethonqubo nezidingo zabavakashi abavela emazweni angaphandle.
UNobhala Wezokuthutha wase-UK uGrant Shapps
Uhlelo olusha olwenziwe lula lokuhambela amazwe omhlaba ngenxa yokuphumelela kokukhishwa kwemithi yokugoma yasekhaya yase-UK, luzohlinzeka ngozinzo olukhulu ezimbonini nakubagibeli.
Izidingo zokuhlolwa nazo zizoncishiswa kubahambi abafanele abagonywe ngokuphelele, abangasazodinga ukuthatha i-PDT lapho beya eNgilandi kusukela ngoMsombuluko 4 Okthoba 4am.
Kusukela ekupheleni kuka-Okthoba, abagibeli abagonywe abafanele abagonywe ngokugcwele nalabo abanomuthi wokugoma ovunyelwe ovela eqenjini elikhethiwe lamazwe angabomvu bazokwazi ukufaka esikhundleni sokuhlolwa kwabo kosuku lwe-2 ngokuhlolwa okushibhile kokuhamba kwesikhathi, ukunciphisa izindleko zokuhlolwa lapho ufika England. Uhulumeni ufuna ukwethula lokhu ekupheleni kuka-Okthoba, ngenhloso yokuthi kube sekukhona lapho abantu bebuya ekhefini lesigamu.
Noma ngubani ohlola ukuthi une-HIV uzodinga ukuhlukanisa futhi athathe ukuhlolwa kwe-PCR okuqinisekisa, ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kumhambi, okungalandelaniswa ngokobulili ukusiza ukukhomba okuhlukile okusha.
Ukuhlolelwa abagibeli abangagonyiwe abavela emazweni angabomvu kuzobandakanya ukuhlolwa kwangaphambi kokuhamba, ukuhlolwa kosuku lwe-2 nosuku lwe-8 PCR. Ukuhlolwa kokukhishwa kuhlala kuyindlela yokunciphisa isikhathi sokuzihlukanisa.
Abagibeli abangaziwa njengabagonywe ngokuphelele ngemigomo egunyaziwe nezitifiketi ezingaphansi EnglandImithetho yezokuvakasha yamazwe omhlaba, kusazodingeka ukuthi ihlolisise ngaphambi kokuhamba, usuku 2 nosuku 8 ukuhlolwa kwe-PCR nokuzihlukanisa izinsuku eziyishumi ekubuyeni kwabo ezweni elingenalo uhlu olubomvu ngaphansi kohlelo olusha lokuhamba olunezigaba ezimbili . Isivivinyo Sokukhishwa sizohlala siyindlela yabagibeli abangagonyiwe abafisa ukunciphisa isikhathi sabo sokuhlukaniswa.
“Senza ukuhlolwa kube lula ngezokuvakasha. Kusuka ngoMsombuluko 4 Oct, uma ugonywe ngokuphelele [ugonyiwe] ngeke udinge ukuhlolwa kwangaphambi kokufika ngaphambi kokufika eNgilandi uvela ezweni elingelona elibomvu futhi kusukela kamuva ngo-Okthoba, uzokwazi ukufaka endaweni yokuhlolwa kosuku lwe-2 PCR ngokugeleza okushibhile, '' kubhala uNobhala uGrant Shapps.
USajid Javid, uNobhala Wezempilo Nokunakekelwa Komphakathi, uthe: “Namuhla siyenze lula imithetho yezokuvakasha ukuze kube lula ukuyiqonda nokuyilandela, sivule ezokuvakasha futhi sinciphise nezindleko zokuya phesheya.
"Njengoba imizamo yokugomela umhlaba wonke iqhubeka nokusheshisa futhi abantu abaningi bethola ukuvikelwa kulesi sifo esesabekayo, kulungile ukuthi imithetho nezimiso zethu zihambisane."
Mnu. Daniel Pimental uthi:
Septemba 26, 2021 ku-07: 04
Uhlelo lwamarobhothi olukhona njengamanje luzothathelwa indawo luhla olulodwa olubomvu lwamazwe nezindawo oluzoqhubeka lubaluleke kakhulu ukuvikela impilo yomphakathi, kanye nezindlela zokuhamba ezenziwe lula zabafika abavela emhlabeni wonke. Kuyasiza kakhulu kithi.